क्रान्तिकारी आवरणका ओलीमार्गी र प्रचण्डमार्गी दुबै मनोरोगीहरुलाई सुझाव ! – eSajha News
क्रान्तिकारी आवरणका ओलीमार्गी र प्रचण्डमार्गी दुबै मनोरोगीहरुलाई सुझाव !
प्रकाशित मिति: १० फाल्गुन २०७७, सोमबार १३:४९
सक्कली र नक्कली कसरी चिन्ने ? सक्कली खोल लगाएर नक्कली माल बेच्ने प्रवृत्ति राजनीतिमा पनि देखिन थालेको छ । तर खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने पसलको पर्दाफास भए झैं ब्यवहारमा उत्रन परेपछि नक्कलीलाई सजिलै चिन्न सकिंदो रहेछ, नक्कलीको मुकुण्डो सजिलै उतारिंदो रहेछ ।
गत पुस ५ गते प्रधानमंत्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेपछि समग्र नेपालको राजनीति ध्रुबीकरण हुन पुगेको छ । राजनीतिले देशको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई समेत प्रभाव पार्नु स्वाभाविक हो , यो घटनाले देशको सर्बोच्च न्यायिक निकायदेखि सबै सम्बैधानिक निकायसम्म राजनीतिक बाछिटाको प्रभावमा परेका छन् ।
केपी ओलीको कदम उन्को स्वेच्छिक हो । निजी सत्तालिप्साले निर्देशित कदम हो । यो कदम राजनीतिक पनि हैन र सम्बैधानिक पनि छैन । तर पनि यो कदमको स्तुति गाउनेहरु राजनीति गरिरहेका छन् र राजनीतिक लाभको नाममा पदीय शुभलाभ प्राप्त गरिरहेका छन् । क्रान्तिकारी आवरणमा राष्ट्रघाती अनुहारलाई छोपेर बसेकाहरुले पनि ओलीको कदमलाई ठीक भन्दै अरुलाई मनोरोगी भन्न पछि पर्दैनन् । स्वयम् मनोरोगले बिक्षिप्त रहेका यस्ता मनुवाले कहिले नेपालको उत्तरी सिमाना अतिक्रमण भयो भनेर दक्षिणको चाकडी गर्न पुग्छन् भने कहिले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसँग फुलबारी मार्ग सट्टापट्टा गर्ने कूतर्क गरेर आफ्नो सक्कली अनुहार देखाउन पुग्छन् । यस्ता पात्रले ओलीमार्गलाई पछ्याउँदै कतै नियुक्ति पाउने लाईन मिलाउन बामदेवको एकता अभियानका साथ सुरु गरिएको कान्तिकारी रुपान्तरणका बिरुद्ध बिष बमन गर्न पनि पुग्दछन् । अहिले ओलीको बिघटन र प्रचण्डको पुनस्र्थापना दुबै एजेण्डा क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरुका लागि सरोकारका बिषय हुन सक्छन् र ? अवश्य सक्दैनन् । त्यसो हो भने बामदेव गौतमले थालेको तेस्रो बिकल्पलाई किन ठीक नभन्ने ? के यसरी नै बामहरुको साझा एजेण्डा बनाउन सकिन्छ ? उत्तरतिर नेपाली सिमाना मिचिएको कूतर्क र फुलबारीमार्गसँग लिपुलेक लगायतका भूभाग साट्ने कुरामा बाम दलहरु सहमत होलान् ? ओलीको हनुमानगिरी गरेर केही पाउँला भन्ने दिवास्वप्नमा लट्ठिएका मूर्खहरुले मात्र यस्तो सोच्न सक्लान् ।
बादल कमरेड देखि मणि थापा हुँदै रायमाझी र राजेश अहिराजसम्मलाई ओलीको कदमले शुभलाभ प्राप्त गराएको छ । कतिको राजनीतिक उचाई नै बाम पुड्के बनाएको छ भने कतिलाई अपराधका खतहरु पनि मेटाउने काममा ओली कदम कामयाबी बनेको छ । ओलीकदमको बिरोध गर्नेहरु भन्दा समर्थन गर्नेहरु लाभान्वीत बनेका छन् । लाभ प्राप्त गर्ने पंक्तिमा चर्चित गायक शिशिर योगी पनि उभिन पुगेका छन् ओलीको स्तुतिमा गीत समर्पण गरेर । यस्तै शुभलाभका लागि सत्यलाई असत्य बनाउन तर्क नभएपछि कसैको क्रान्तिकारी बिचारलाई मनोरोगी भन्नेलाई नेता बन्ने रहर हुँदैमा कसरी नेता मान्न सकिएला र ? यस्तालाई नेता मान्नु र ओली र प्रचण्डलाई नै नेता मानेर बाम एकीकरणको गीत गाउनु उस्तै उस्तै भएन र ?
भागबण्डाले नपुगेर ओलीलाई बिस्थापित गर्ने प्रयासमा लागेका प्रचण्ड र माधव नेपालहरु ओलीले प्रतिगमन गरे भन्दै सडकमा पुगेका छन् । ओलीको कदमलाई पनि प्रतिगमन किन पो भन्नु पर्ला र ? प्रतिगमन त जनसेनाको बिघटन गरेको दिनदेखि प्रचण्ड र बाबुराम लगायतले त्यतिबेलै गरेका हुन् ।
सत्तामा रजाँई गर्ने चाहनामा जनतालाई खरिद गरेर सडकमा जात्रा देखाउँदै लौ हाम्रो शक्ति हेर भन्दै ओलीलाई पनि जनता खरिद गर्ने प्रतिस्पर्धामा उतारेका छन् प्रचण्ड र माधवहरुले । सत्तासिन राजनीतिक दलका नेताहरुमा देखिएको यो लज्जाजनक प्रतिस्पर्धाको प्रभाव देशका अन्य राजनीतिक दलहरुमा र संघ , संगठन लगायत सामाजिक रुपान्तरणको अभियानमा लागेकाहरु समेत सबै क्षेत्रमा दखिएका छन्, सबै क्षेत्र प्रभावित बनेका छन् । कसैले ओली कदमको प्रशंशा गरिरहेका छन् भने कतिपयले प्रचण्डको पक्षमा उर्जा खर्च गरिरहेका छन् र आफ्नो राजनीतिक जीवन नै दाउमा लगाईरहेका छन् । यसै मेसोमा योगेश भट्टराई देखि तिलक परियारसम्म चर्चाका पात्र बन्न पुगेका छन् । राजनीतिक जीवनलाई नै सत्कर्म ठानेर काम गर्दै आएकाहरुसमेत अहिलेको अवस्थामा ओली कदमको बैशाखी बन्न हतार गरिरहेको अवस्था छ ।
यसरी देशको राजनीतिक तरलता अनौठो ढंगले बिकसित भैरहेको अवस्था छ । यत्तिमै राजनीतिक भागबण्डाको किचलो सकिने अवस्था देखिदैन । ओली र प्रचण्डका छुट्टा छुट्टै समूहमा पनि पदीय भागबण्डाको कसरत चलिरहेको छ । ओली समूहमा ओली र बादलका गूट बनेका छन् भने प्रचण्ड(माधव समूहमा पनि आधा आधा भागबण्डा गरेर दुबैले आ(आफ्ना सशक्त गूट बनाउन सफलता हासिल गरेका छन् । तर जतिसुकै गूटहरु बने पनि ओलीमार्ग र प्रचण्डमार्गमा लुटेरा संसदबादको निरन्तरताको मनोरोग देखिन्छ । यी दुबै लुटेरा समूहहरुलाई जुटाउने कसरतमा कमरेड बामदेव गौतमले आफ्नो नेतृत्वमा छुट्टै अभियान थालनी गरेका छन् । गौतमको अभियानले दुबै मनोरोगीहरुको उपचारमा क्रान्तिकारी बिचार प्रत्यारोपण गर्ने प्रयासमा सmलता प्राप्त गरोस् भन्ने कामना गर्नुलाई मनोरोगीहरुले मात्र गलत देख्न पुग्दछन् ।
ओलीमार्गी र प्रचण्डमार्गीहरुबीच एकता अपरिहार्य छ र अर्को बिकल्प छैन भन्ने अडानमा बामदेवको अभियानले गति लिएको छ । अभियानले यथास्थितिबादको लुटेरा संस्कारको निरन्तरतालाई ब्रेक लगाउन सक्नु पर्छ भन्ने मान्यतामा सहयोग मात्र हैन सहकार्यमै पनि जोडिन जरुरी हुन्छ । पूर्व नेकपा (माले) मा क्रियाशील रहेकाहरु धेरैको सहभागिता यस अभियानमा देखिएको छ । क्रन्तिकारी आवरणमा हजारौं जनताको रगत बगाएर प्रतिकृयाबादको दलाल बन्न पुगेका यथास्थितिबादी लुटेराहरुको निरन्तरताले देशमा शान्ति र स्थिरता कायम हुन नसक्ने सन्देश दिंदै बामदेव कमरेडको अगुवाईमा चलिरहेको एकता अभियानले जवजकै आवरणमा क्रान्तिकारी रुपान्तरणको परिकल्पना गर्छ भने त्यसलाई प्रतिकृयाबादी दलालबाद भन्दा तुलनात्मक रुपमा प्रगतिशील नै मान्नु पर्दछ , मैले पढेको र बुझेको माक्र्सबादले यस्तै शिक्षा दिएको छ । आगे सबैलाई चेतना भया ! जनधारणाबाट
१० फाल्गुन २०७७, सोमबार १३:४९ मा प्रकाशित